Shiinaha 10 guddiga wareegga lakabka ee warshad PDA Ultra-rugged iyo soosaarayaasha | Pandawill
FOB Qiimaha: US $ 0.85 / Cadad
Lakabyada 10 lakab
Dhumucda guddiga 1.20MM
Cabbirka guddiga 300 * 280MM / 2 kumbiyuutarada
Waxyaabaha Shengyi S1000-2 (TG≥170 ℃) FR-4
Dhammeystirka dusha sare Dahab dahab ah (ENIG)
Cilad-darrada Isbeddelka Hal-abuurka ah & Kala-baxa Kala-baxa
Codsiga PDA Ultra-rooga ah
Qeybtaan, waxaan jeclaan laheyn inaan ku siino faahfaahin aasaasi ah oo ku saabsan xulashooyinka qaabdhismeedka, dulqaadka, qalabka, iyo tilmaamaha qaabeynta ee looxyada kala duwan. Tani waa inay noloshaada u fududeeysaa sidii horumariyaha oo ay kaa caawisaa sidii aad u qaabeyn lahayd looxyada wareegsan ee daabacan si ay ugu fiicnaadaan soosaarida kharashka ugu hooseeya.
Heerka Gaar ah**
Cabirka ugu badan ee wareega 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) ---
Tirada lakabyada ilaa 28 lakab Codsi
Dhumuc dhumuc leh 0.4 mm - 4.0mm Codsi
Maaddaama aan nahay alaab-qeybiyaha teknoolojiyada PCB-ga, mugga, xulashooyinka waqtiga hoggaanka, waxaan haynaa xul ah agab caadi ah oo ballaadh ballaadhan oo noocyo kala duwan ah oo PCB ah lagu dabooli karo oo had iyo jeer laga heli karo guriga.
Shuruudaha looga baahan yahay waxyaabo kale ama qalab gaar ah sidoo kale waa la buuxin karaa inta badan kiisaska, laakiin, iyada oo ku xidhan shuruudaha saxda ah, ilaa 10 maalmood oo shaqo ayaa loo baahan karaa si loo soo iibsado alaabta.
Nala soo xiriir oo kala hadal baahiyahaaga mid ka mid ah iibkeena ama kooxda CAM.
Qalabka caadiga ah ee lagu hayo keydka:
Qaybaha Dhumucdiisuna Dulqaad Nooca dharka
Lakabyada gudaha 0,05mm +/- 10% 106
Lakabyada gudaha 0.10mm +/- 10% 2116
Lakabyada gudaha 0,13mm +/- 10% 1504
Lakabyada gudaha 0,15mm +/- 10% 1501
Lakabyada gudaha 0.20mm +/- 10% 7628
Lakabyada gudaha 0,25mm +/- 10% 2 x 1504
Lakabyada gudaha 0.30mm +/- 10% 2 x 1501
Lakabyada gudaha 0.36mm +/- 10% 2 x 7628
Lakabyada gudaha 0,41mm +/- 10% 2 x 7628
Lakabyada gudaha 0,51mm +/- 10% 3 x 7628/2116
Lakabyada gudaha 0,61mm +/- 10% 3 x 7628
Lakabyada gudaha 0.71mm +/- 10% 4 x 7628
Lakabyada gudaha 0,80mm +/- 10% 4 x 7628/1080
Lakabyada gudaha 1,0mm +/- 10% 5 x7628 / 2116
Lakabyada gudaha 1,2mm +/- 10% 6 x7628 / 2116
Lakabyada gudaha 1,55mm +/- 10% 8 x7628
Uurka 0.058mm * Waxay kuxirantahay qaabeynta 106
Uurka 0.084mm * Waxay kuxirantahay qaabeynta 1080
Uurka 0.112mm * Waxay kuxirantahay qaabeynta 2116
Uurka 0.205mm * Waxay kuxirantahay qaabeynta 7628
Dhumucda Cu ee lakabyada gudaha: Heerka - 18µm iyo 35 µm,
markii la codsado 70 µm, 105µm iyo 140µm
Nooca maadada: FR4
Tg: qiyaastii. 150 ° C, 170 ° C, 180 ° C
atr at 1 MHz: ≤5,4 (caadiga ah: 4,7) Inbadan ayaa la heli karaa marka la codsado
Isku-darka PCB waa qodob muhiim u ah go'aaminta waxqabadka EMC ee sheyga. Isku-soo-uruurinta wanaagsan waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah yareynta shucaaca ka soo baxa wareegyada PCB, iyo sidoo kale fiilooyinka ku dhegsan guddiga.
Afarta arrimood ayaa muhiim ah marka loo eego tixgelinta ururinta:
1. Tirada lakabyada,
2. Tirada iyo noocyada diyaaradaha (xoogga iyo / ama dhulka) la isticmaalay,
3. Dalbashada ama isku xigxiga lakabyada, iyo
4. Farqiga u dhexeeya lakabyada.
Badanaa tixgelin badan lama siiyo marka laga reebo tirada lakabyada. Marar badan sedexda arimood ee kale waa muhiimad siman. Go'aaminta tirada lakabyada, waxyaabaha soo socda waa in la tixgeliyaa:
1. Tirada calaamadaha la maro iyo qiimaha,
3. Badeecaddu ma inay buuxisaa shuruudaha sii-deynta Fasalka A ama Class B?
Badanaa kaliya shayga koowaad ayaa la tixgeliyaa. Xaqiiqdii dhammaan walxaha waa muhiim muhiim waana in loo tixgeliyaa si siman. Haddii naqshadeynta ugu habboon lagu gaaro waqtiga ugu yar iyo qiimaha ugu hooseeya, sheyga ugu dambeeya wuxuu si gaar ah muhiim u noqon karaa oo aan la iska indhatirin.
Baaragaraafka kor ku xusan waa inaan loo macneyn inuu micnaheedu yahay inaadan sameyn karin naqshad EMC wanaagsan oo ka kooban afar ama lix lakab, maxaa yeelay waad awoodi kartaa. Waxay kaliya muujineysaa in ujeedooyinka oo dhan aan la wada fulin karin isla markaana waxoogaa tanaasul ah ay lagama maarmaan noqon doonaan. Maaddaama dhammaan ujeeddooyinka EMC ee la doonayo ay la kulmi karaan guddi sideed lakab ah, ma jirto sabab loo adeegsado in ka badan siddeed lakab oo aan ka ahayn in lagu meeleeyo lakabyo dheellitiran oo dheeri ah.
Dhumucda isku-darka isku-darka ee PCB-yada badan waa 1.55mm. Waa kuwan tusaalooyin qaar ka mid ah iskudhaf isku-dhafan ee PCB-ga.
Bir Xudunta PCB
Mashiinka Aaladda Daabacan ee Birta ah (MCPCB), ama PCB-da kuleylka leh, waa nooc PCB ah oo leh wax bir ah oo saldhig u ah qaybta kuleylka kuleylka ee guddiga. Ujeedada udub dhexaadka MCPCB waa in kuleylka laga weeciyo qaybaha muhiimka ah ee guddiga iyo meelaha muhiimka u ah sida taageerada birta ee birta ama xudunta birta ah. Biraha hoose ee MCPCB waxaa loo adeegsadaa bedel ahaan looxyada FR4 ama CEM3.
Qalabka PCB-ga Birta ah iyo dhumucdiisuna
Xudunta birta ee PCB-da kuleylka waxay noqon kartaa aluminium (aluminium udub dhexaad u PCB), naxaas (PCB naxaas kobbar ah ama PCB naxaas culus) ama isku dar ah aalado gaar ah. Tan ugu caansan waa aluminium asaasiga ah PCB.
Dhumucda udub dhexaadka biraha ee taarikada saldhigga PCB caadi ahaan waa 30 mil - 125 mil, laakiin taarikada qaro weyn iyo dhuuban ayaa suuragal ah.
MCPCB dhumucda bireed copper waxay noqon kartaa 1 - 10 oz.
MCPCBs waxay faa'iido u yeelan karaan inay u adeegsadaan awooddooda inay dhexgalaan lakabka polymer dielectric oo leh hago kuleyl sare oo iska caabin ah kuleylka hoose.
PCB-yada muhiimka u ah birta waxay wareejiyaan kuleylka 8 ilaa 9 jeer ka dhaqso badan FR4 PCBs. MCPCB waxay dahaarisaa kuleylka faafiya, haynta kuleylka dhaliya qaybaha qaboojiyaha taasoo keenta waxqabad kordha iyo nolosha.
Hore: 8 lakabka guddiga wareega OSP dhammaystir PC gundhig
Xiga: 12 lakab sare tg FR4 PCB sare loogu talagalay Nidaamka Dhexgalka